Howlgalka Badweynta Hindiya oo xoreeyay magalada Buulomareer
Marka,Somalia 30.August [GAROWEONLINE] Ciidanka DF iyo AMISOM ayaa gacanta ku dhigay magalada Buulomareer iyo Golwayn oo ka tirsan Gobalka Shabelada hoose ka dib dagaal culus oo dhexmaray kooxda Al-Shabab.
Howlgalkan oo loogu magacdaray Badweynta Hindiya ayaa shalay oo Jimce ahayd ka bilowday Shabeladda hoose kaasoo ku wajahan Magalada Baraawe oo ah halbowlaha kooxda Al-Shabab.
Gudoomiyaha Gobalka Shabeelada hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa warbaahinta gudaha u sheegay howlgalkan inuu yahay mid xalay bilowday laguna damacsan yahay in Al Shabab looga saaro Gobalka Shabeelada hoose.
Guddoomiyaha degmada Qoryooleey Maxamed Xaaji Cismaan Gaagaale ayaa dhankiisa warfidiyeenka u sheegay inay dagaalka Al-Shabab la galeen ku dilee 20-dagaal yahay afar kalena ay gacanta ku dhigeen.
Waxa uu sheegay Gaagaale howlgalku inuu sii socon doono inta kooxda laga saarayo guud ahaan gobalka Shabeelada hoose.
Docda kale Al-Shabab ayaa guulo ka sheegatay dagaalka ciidanka huwanta ah kula gashay Buulomareer balse ma aysan cadayn kooxdu in deegaanka laga qabsaday.
Awooda Al-Shabab ayaa ku hartay gobaladda Shabeelada hoose iyo Jubadda dhexe waxaase socda dadaalo lagu damacsan yahay ururkan in dalka laga sifeeyo.
Magalada Buulo-mareer oo dhanka koonfureed kaga beegan magalada Muqdisho ayaa u jirta 120-km.